Mumhanzi Wapamhepo Kurodha pasi: Dzimwe nzira dzeSpotify | Ndipei zororo
Paco Maria Garcia | | Download music
Mumhanzi unoteererwa mukutenderera. Pamwe mukombuta wega, kunyangwe kazhinji iri muSmartphone, masaisai emimhanzi nhasi anofamba nebandaneti kana nema microwaves, angave ari GSM kana CDMA.
Mukati meiyi nzvimbo yakakura, imwe kambani yatora mazhinji ekurodha pasi. Asi handiyo yega Kune dzimwe nzira dzinoverengeka dzeSpotify, mbiri "Freemium" kana yakabhadharwa.
1 Spotify: vese vane simba
2 Yekupedzisira.fm: dangwe
3 SongFlip: yakanaka, yakanaka uye yemahara
4 YouTube Iyo chaiyo nzira yeSpotify?
5 YouTube Red. Mhinduro kuminamato?
6 Deezer: iyo "yakafanana" imwe nzira
7 Apple Music uye Google Play Music. The Spotify mhondi?
Spotify: vese vane simba
Yakavakirwa muStockholm uye online kubva Gumiguru 7, 2008, Spotify ndiyo iri kure musika mutungamiriri. Pakazosvika Zvita 2017, kambani yakasvika mamirioni zana evashandisi. Yeiyi nhamba inokatyamadza, hafu yekubhadhara kuti unakirwe nebasa.
Kunyangwe paine vamwe vanokanganisa uye vasina kujairira kukakavara, zvinoita sekudaro kukura kwepuratifomu iyi hakugumi. Iyo inopa vayo vanyoreri katarogu yedzinopfuura mamirioni makumi matatu enziyo, pamwe nekusagona kusingagumi kuchinjika kune chero chishandiso.
Kunyangwe panguva ino, mamwe ese maapplication ari kusarira kumashure, mazhinji e dzimwe nzira dzeSpotify dzinopa dzakawedzerwa tsika dzinokukoka kuti uedze.
Iyi chikuva yakagadzira nzira yekutenderera, kunyangwe pamberi peYouTube pachayo. Kubva pakavambwa muna 2002, yakagadzirawo nzira yezvatinoziva nhasi se social network
Inoshanda munzira mbiri: yekutanga inobvumira vashandisi vayo kuvaka yavo mimhanzi kuunganidzwa. Inopawo sarudzo yekuteerera mawairesi "pamutsetse", nguva dzose zvinoenderana nezvinodiwa zvemimhanzi zveumwe nemumwe anonyorera.
Last.fm inochengetedza machati emimhanzi achigadziridzwa, nenziyo dzinoteererwa zvakanyanya pasi rese. Uye zvakare, vese avo vanonyoresa pane peji vanogona kugadzira avo ma profiles, kuti vagovane zvavanofarira uye zvavanofarira nevamwe vese nharaunda. Zvese mune yakanakisa maitiro echinyakare "Social Network".
Izvo zvine free version, iyo inosanganisira kushambadzira pakati penziyo. Iko kune zvakare sarudzo yekubhadhara inodzvinyirira chero rudzi rwezvishambadziro zvekushambadzira. Inowanikwa zvese mushanduro yedesktop yemakomputa ako kana nharembozha, yeApple kana iOS Smartphone uye mapiritsi.
SongFlip: yakanaka, yakanaka uye yemahara
Iyo yemahara uye inoshanda kwazvo yekushambadzira sarudzo yemafoni nhare. Iine katarogu yemimhanzi isina kana chinhu chekugodora kumapuratifomu anotungamira mumusika. Sezvazviri "zvakasikwa", chinhu chega chinobvunzwa neapp kubva kunevanyori vayo kuteerera kune zvimwe kushambadza pakati penziyo.
Mimhanzi inogona kuridzwa zvisina kujairika kana vashandisi vanogona kuvaka yavo yavo yekutamba. Iko kunyorera kunochengeta rondedzero dzichivandudzwa nemisoro inoteererwa zvakanyanya nenharaunda.
Iyo chete yakakosha yekumisikidza ndeyekuti haina kupa akazara maalbum asi ega nziyo. Avo vanoshuvira kuteerera kumatragi ese eimwe mimhanzi ndiro, vanofanirwa kuzviwedzera kune playlist, imwe panguva. Hapana chinhu chisingakundike, kunyanya tichifunga kuti iri "freemium" bhizinesi modhi. Inowanikwa kune ese maApple uye Apple zvishandiso.
YouTube Iyo chaiyo nzira yeSpotify?
Iyo yakanyanya kuwanda mimhanzi katarogu mune ese ewebhusaiti haisi paSpotify, asi paYouTube. Nekudaro, iyo-yeGoogle-yeplatifomu ine zvakakomba zviyero zvekukwikwidza zvakakomba zvinopesana nekambani yeSweden. Kunyanya, kana zvasvika kune zvinoshandiswa zvemafoni nhare.
Pane chero smartphone kana piritsi, zvisinei neiyo sisitimu yekushandisa, iri zvisingaite kuteerera mimhanzi paYouTube pasina chishandiso chiri kumberi uye skrini iri. Uye izvi mukuwedzera mukudzivirira kushandiswa kwemidziyo yebasa chero ripi zvaro pane kutamba mimhanzi; Izvo, sezvatinogona kuona, mari yesimba iyo ingangoita hapana chingaitise.
Nekudaro, pamalaptop kana pamatafura, iyo nyaya yakatosiyana. Zvimwe kuburikidza nekutamba kwakasarudzika kana kuburikidza nekutamba zvinyorwa (zvemunhu kana zvakaburitswa nevamwe vashandisi). Izvo zvinokwanisika kuita chero chero chiitiko pakombuta, apo iyo app iri kumhanya kumashure.
YouTube Red. Mhinduro kuminamato?
Pakutanga yakaburitswa se YouTube Music Kiyi muna 2014. Zviri mhinduro kune zvinoshandiswa nemushandisi, uyo aida kuti akwanise kushandisa mimhanzi pasocial network se imwe nzira kune Spotify pane nharembozha.
YouTube Red, kusiyana neiyo "standard" application yeIOS uye Android, inobvumira mimhanzi kutamba kumashure kana nechiratidziri kure uye kwakakiiwa. Pamusoro pezvo, inopa mukana wakanangana nekatalog yese inowanikwa kuGoogle Play Music; zvakare kune akateedzana uye mabhaisikopo akagadzirwa pasi peiyo YouTube Red Original mhando.
Inongopihwa mune yakabhadharwa vhezheni, saka ese mafomu ekushambadzira anobviswa kunze. Panguva ino, inongowanikwa muUnited States, Mexico, Australia, New Zealand neSouth Korea. Kuwedzera kunotarisirwa kukura kuEurope hakupedze kusvika; uye kune avo vanonetseka kuti zvichaita here rimwe zuva.
Deezer: iyo "yakafanana" imwe nzira
Kana chikuva chikaita kunge chinoteedzera mashandiro eSpotify pasina kunyanyisa kunyara, ndiye Deezer. Iyi webhusaiti yeFrance yakawana nhamba yakanaka yevanyoreri pasirese (vangangoita mamirioni makumi maviri nemana); asi hazvidi kunyepedzera kudzingirira nekubata mutungamiri wemusika.
Vashandisi, kana vakanyoreswa, vanogona kusarudza pakati pe "Freemium" modhiyo, ine kushambadza kunosanganisirwa, kana iyo Premium vhezheni. Iine katarogu mimhanzi yakatanhamara, nezvimwe yemakumi mana emamiriyoni madingindira ekusarudza kubva.
Inowanikwa kune nhare mbozha, zvese zveApple neIOS. Izvo zvakafanana nedesktop yayo vhezheni, inowirirana neWindows uye Apple Mac anoshanda masystem.
Apple Music uye Google Play Music. The Spotify mhondi?
Makambani maviri ane simba kwazvo pasi pano, asina kusiiwa ari ega kuti aone kuti Spotify inyengeri sei semutungamiriri asinganetsi wekutepfenyura odhiyo. Ose ari maviri akatanga mafomu, kwete chete ezvigadzirwa zvinomhanya padivi peanoshandisa masystem. Chinangwa chikuru cheApple Music neGoogle Play Music kwaive kupedza kambani yeSweden.
Kunyangwe paine chero maviri ekubhejera achigona kunzi haana kubudirira, mhedzisiro yacho haisati yakatarirwa. Spotify anoramba ari mutungamiri pasina mubvunzo. Zvichakadaro, kubva kuCupertino uye kubva kuSilicon Valley, vanoramba vachiedza kubata.
Mifananidzo Sosi: Cell Phone Tracker /
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » mumhanzi » Download music » Dzimwe nzira dzeSpotify
Ndekupi kwaunotora mimhanzi yemahara?